Mampiasa endrika WordPress sy Gravity hisamborana fitarihana | Martech Zone
mampiasa WordPress satria ny rafitry ny fitantanana ny atiny dia mahazatra ankehitriny. Maro amin'ireo tranokala ireo no tsara tarehy nefa tsy manana paikady hisamborana ireo fitarihana marketing any anaty. Ny orinasa dia mamoaka whitepapers, fandinihana tranga ary mampiasa tranga amin'ny antsipiriany amin'ny antsipiriany nefa tsy mbola nisambotra ny mombamomba ny olona izay misintona azy ireo.
Ny fampivelarana tranokala misy fisintomana izay azo tratra amin'ny alàlan'ny fisoratana anarana dia paikady marketing miditra tsara. Amin'ny alàlan'ny fakana ny mombamomba ny fifandraisana na angamba ny fidirana an-tserasera momba ny fifandraisana mailaka mitohy - ampahafantarinao ny mpampiasa fa mety ho nifandray izy ireo ho valin'ny fampahalalana momba azy ireo.
Raha tsy mampiasa WordPress ianao, te hampiasa endrika amin'ny sehatra na toerana maro, na manana filàna tena mandroso, dia ny tolo-kevitro foana formstack. Tsotra ny fampiasana, fananganana ary fametrahana na inona na inona tranokalanao. Raha mampiasa WordPress ianao, hery misintona Forms dia nanao plugin malaza be izay miasa tsara amin'ny fisamborana angona.
Gravity Forms dia plugin mampiditra drag and drop endrika tsy manam-paharoa novolavolaina manokana ho an'ny WordPress. Izy io dia mivoatra tsara, manana taonina fanampiny add-ons ary fampidirina, ary - ny tsara indrindra - mamonjy ny fandefasana rehetra ao anaty WordPress. Maro amin'ireo fitaovana endrika hafa any ivelany no manosika ny angona ho any amin'ny adiresy mailaka na tranokala ivelany. Raha misy olana amin'ny fandalànana izany data izany dia tsy manana karazana backup ianao.
Misy koa ny endri-tsoan'ny gravity
Mora ampiasaina, endrika mahery - Amboary haingana sy amboary ny endrika WordPress anao amin'ny alàlan'ny tonian-dahatsoratry ny endrika hita maso. Safidio ny sahaninao, amboary ny safidinao, ary apetraho mora foana ny endrika ao amin'ny tranokalan'ny WordPress anao amin'ny alàlan'ny fitaovana namboarina.
30+ Vonona ny hampiasa saha saha - Ny Forms Gravity dia mitondra fidirana an-tsaha isan-karazany amin'ny tendron'ny rantsan-tànanao ary matokia anay, hisaotra anao ny rantsan-tananao. Fidio ary safidio izay saha tianao hampiasaina amin'ny alàlan'ny fanovana endrika mora ampiasaina.
Lojika misy fepetra - Conditional Logic dia ahafahanao manamboatra ny endrikao hampisehoana na hanafenana ireo saha, fizarana, pejy, na koa ny bokotra mandefa mifototra amin'ny safidin'ny mpampiasa. Ity dia ahafahanao mifehy mora foana izay fampahalalana angatahin'ny mpampiasa anao omena ao amin'ny tranokalaninao Powered WordPress ary ampanjifaina manokana ny takelaka ilaina amin'ny filan'izy ireo.
Email Notifications - Miezaka ny hitahiry an-tampon'ny torolàlana rehetra ateraky ny tranokalanao? Gravity Forms dia manana mailaka mpamaly mailaka hitazomana anao hahafantatra isaky ny mandefa taratasy.
Mampakatra rakitra - Mila manana ny mpampiasa anao handefa antontan-taratasy? Photos? Mora izany. Ampio fotsiny ny saha fampidiran-drakitra amin'ny endrikao ary tahirizo ao anaty mpizara anao ireo rakitra.
Tehirizo ary tohizo - Noho izany dia nanamboatra endrika be pitsiny ianao ary mety maharitra elaela vao vita. Miaraka amin'ny Forms Gravity, azonao atao ny mamela ny mpampiasa anao hitahiry endrika feno vita ary hiverina any aoriana hamita azy.
Kajy - Ny Gravity Forms dia tsy ny plugin anao isan'andro… matematika koa io. Manaova kajy mandroso mifototra amin'ny soatoavina napetraka ary mahataitra ny namanao.
Integrations - Mailchimp, PayPal, Stripe, Highrise, Freshbooks, Dropbox, Zapier sy ny maro hafa! Ampifandraiso amin'ny tolotra sy fampiharana isan-karazany ny endrikao.
hery misintona Forms dia ilaina amin'ny tranokala WordPress rehetra. Samy mpiara-miasa isika ary manana fahazoan-dàlana amin'ny fampandrosoana!
Sintomy ny Forms Gravity
Tags: mitarika fitarihanatenyendrika misintonamampihiditra barotraPluginWordPressendrika wordpressplugin WordPress
Mamorona Tondrozotra nomerika ho an'ny orinasa mandroso
11 Okt 2009 amin'ny 5:19 PM
Video tena manampy, Douglas. Tohizo hatrany izany zavatra izany.
26 Okt 2009 amin'ny 7:46 PM
Tsara ny tut, tsotra ary nanampy an'ity GravityForms newbie ity amin'ny famoahana ny endriny voalohany. http://bit.ly/4ANvzN
Tianao ve ny ady mafy? Toa manampy "fisavoritaka" (izany hoe bokotra bebe kokoa) ho an'ny mpamaky sasany… ary sarotra ny mahazo fanehoan-kevitra tsy misy azy!
22 Aogositra 2011 à 7:24
Gravity Forms sy WordPress dia fitambarana tsara. Manana soso-kevitra ve ianao hanafenana ny URL tena izy amin'ny rakitra alaina sy ny fanolorana URL fampidinana hafa izay azo ampiasaina indray mandeha monja? Afaka ampiasaina amin'ny famoronana rohy fampidinana indray mandeha ve ny zavatra toa ny bit.ly? Mieritreritra ny hampiasaina amin'ny fampidinana hira novidina na rakitra hafa tadiavinao fiarovana bebe kokoa aho?
22 Aogositra 2011 à 7:51
Raha ny marina dia tsy manafina ny tena URL aho – apetrako ao amin'ny mailaka valin-kafatra ny rohy ka mitaky azy ireo hanana adiresy mailaka manan-kery. Azoko antoka, miaraka amin'ny kaody kely kely, azonao atao ny manome azy ireo rohy misy tenifototra izay ny adiresy mailaka misy encryption - dia raha manindry an'io izy ireo dia ho hitanao raha efa nalaina indray mandeha ilay izy ary manakana ny olon-kafa tsy hisintona azy.
22 Aogositra 2011 à 8:10
Tsy hahomby ny fanaraha-maso raha alaina sy esorina na ovaina ilay rohy. Ny fahafahana mampiasa karazana fitaovana fanafohezana URL mba hamoronana rohy haingana sy hanakorontana ary hizara amin'ny mpampiasa iray izay hiasa im-betsaka efa voafaritra mialoha dia mety ho fanampim-panampiana tena tsara.
22 Aogositra 2011 à 8:37
Nilaza marina izay nataoko ianao. Izany no ampahany 'miaraka amin'ny kaody kely kely'.
Apr 30, 2013 amin'ny 7: 14 AM
ampio mpitantana rakitra ary mamorona faritra fampidinana tsotra - tsy misy url intsony
May 10, 2015 amin'ny 12: 13 AM
Tsy misy mampiasa endrika gravity + fampidirana chimp mailaka miaraka amin'ny boaty popup / popover mitete-midina haka adiresy mailaka ho an'ny gazety? Tsikaritro fa tena mampiasa drip ity tranokala ity ary mitady fomba hananana endrika mitete tsy misy vidiny.
Mampiasa Gravity Forms izahay ary nampihatra Mailchimp saingy tsy nahita izay tadiavinao. Manaiky aho - mety tsara raha manana an'io fitaovana tsotra io! OptinMonster tsy dia ratsy loatra ary azo amboarina be.